Thomas Tuchel Oo Magacaabay Saddex Laacib Oo Chelsea Ah Oo Ay Tahay Inaad Iskaga Fogaato Dagaalkooda - Laacib
HomeWararka Champions LeagueThomas Tuchel Oo Magacaabay Saddex Laacib Oo Chelsea Ah Oo Ay Tahay Inaad Iskaga Fogaato Dagaalkooda
Thomas Tuchel Oo Magacaabay Saddex Laacib Oo Chelsea Ah Oo Ay Tahay Inaad Iskaga Fogaato Dagaalkooda
TABABARE Thomas Tuchel ayaa bixiyey digniin u diray kooxda FC Porto oo ay lugta labaad ee wareegga siddeedda Champions League la ciyaarayaan Salaasada, waxaanu magacaabay saddex laacib oo aan dagaalka lagaga guuleysanin oo kooxdiisa ku jira oo halgan la geli doona.
Blues ayaa ciyaartii hore ku badisay 2-0 iyadoo goolashana ay u dhaliyeen Mason Mount iyo Ben Chilwell.
Tuchel oo la hadlayaya warbaahinta ka hor kulanka lugta labaad ee Champions Leageu ee FC Porto, waxa uu tilmaamay in kooxdiisu ay haysato saddex dagaalyahan oo ay tahay in aad iskaga fogaato dagaalkooda, kuwaas oo uu ku sifeeyey kuwo aan daalin.
Macallinka reer Germany ayaa yidhi: “Si daacad ah haddii aan u hadlo, ma doonaysid in aad la dagaallanto Antonio Rudiger, Kova (Mateo Kovacic) iyo Azpi (Cesar Azpilicueta).
“Waxay ila tahay, in aanad dagaal kala hor tegin iyaga, sababtoo waxay diyaar u yihiin dagaal, waana dabcigooda in ay garoonka kusoo bandhigaan, ayna difaacaan danaha kooxdooda.
“Halkaa inta ay joogaan waxaanu iskugu hallaynaa si aanaan iskugu hallayn karin qof kale.”
Thomas Tuchel waxa kale oo uu sheegay in la gaadhay waqtigii ay Chelsea ku guuleysan lahayd horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League, waxaanu yidhi: “Waxa aan halkan u joogaa in aan ciyaaraha ku guuleysto iyo in natiijadu noqoto in aan koobab ku guuleysto. Tani waa waxa aan ka dalbadonaftayda.”
Si gaar ah isaga oo uga hadlaya Champions League ayuu yidhi: “Hadda, waxa la gaadhay waqtigii.”